Lviv - युक्रेनमा अध्ययन. युक्रेनी प्रवेश केन्द्र
Lviv एक अद्वितीय शहर हो in which history, संस्कृति, पूर्व र पश्चिम - - दुई दुनिया को mentality tolerantly मर्ज गरियो. यो शहर क्रिमीआ देखि बराबर दूरी मा निहित भनेर याद रोचक छ (वा, विशेष, Theodosia शहर), पूर्व मध्ययुगीन Kafa, र भेनिस. स्पष्ट, Lviv गरेको भौगोलिक स्थान वैश्विक संस्कृति र सभ्यताहरू को चौराहे मा यसको inimitable वातावरण प्रभावित भएको छ. धेरै युद्ध द्वारा ल्याए Lviv इतिहास को लामो सदियों धेरै दुःखकष्टलगायत बावजुद, शहरमा वास्तु स्थलहरू लगभग जस्ताको तस्तै रह्यो.
Lviv एक ठूलो क्षेत्रीय केन्द्र हो, को क्षेत्र कब्जा 155 वर्ग. किलोमिटर. बारेमा 730,000 मान्छे Lviv मा स्थायी निवास. शहर जनसंख्या सबैभन्दा जातीय यूक्रेनियन comprised छ, हुनत यस्तो डंडे रूपमा अन्य समुदायमा, यहूदीहरूले, युनानी, जर्मन, आर्मेनियालीहरूको, रूसी, आदि. पनि प्रतिनिधित्व गर्दै.
Lviv विद्यार्थीहरूको एक शहर हो. बारेमा 150,000 विद्यार्थी specializations को एक विस्तृत श्रृंखला संग उच्च शिक्षा संस्थानहरुमा अध्ययन. सार्वजनिक राय पोल अनुसार, Lviv दोस्रो सर्वाधिक लोकप्रिय युक्रेनमा राजधानी पछि शहर हो - कीव. डिसेम्बर देखि शुरू 1998, शहर को केन्द्रीय भाग यूनेस्को को सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदामा समावेश गरिएको थियो. 20% सबै वास्तु स्थलहरू Lviv मा स्थित हो.
Lviv खुला हावा संग्रहालय छ and the embodiment of the Ukrainian culture and European charm, अविस्मरणीय दृश्यहरू, र वास्तुकला को अद्वितीय स्मारक, पुरानो परम्परा र, पक्कै पनि, दिग्गज Lviv कफी घरहरू मा स्वाद कफी. मेहमान शहर मा Reigning राजसी सौम्य को विशेष वातावरण द्वारा charmed छन् र स्थानीय habitants को आनंद से जिते आतिथ्य.
Lviv धेरै पुरानो विश्वविद्यालय को शहर हो, अद्वितीय वैज्ञानिक प्रतिष्ठानबाट र अभिलेख, र प्रसिद्ध पुस्तकालयहरु र संग्रहालयहरु. तपाईं शान्त सडकमा बारेमा टहलने गर्न सक्छन्, प्रत्येक समय खोजी केहि नयाँ र आफूलाई लागि रोचक.
अन्तिम अपडेट:24 सक्छ 19